'अहँ! त्यस्तो केटी चाहिँदैन' :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
'अहँ! त्यस्तो केटी चाहिँदैन'
नेपाली सिनेमाका प्रायः दर्शक युवा हुन्। उनीहरू सिनेमाको पर्दामा आफ्ना कथाहरू हेर्न चाहन्छन्। हेमराज बिसी तिनै निर्देशक हुन् जसले आफ्ना सिनेमामा युवाका कथा, अझ विशेष गरी शहरी युवाका प्रेम कथा पस्कन्छन्। पछिल्लो पटक उनी 'दि ब्रेकअप ' सिनेमा लिएर दर्शकमाझ आएका छन्।
ती युवालाई पर्दामा प्रस्तुत गर्दैछन् अभिनेता आशिरमान देशराज श्रेष्ठ जोशी। सिनेमाले युवापुस्ता पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको जुनी जुनी सँगै बाच्ने र मर्ने कसम खान नपर्ने 'क्याजुअल' सम्बन्धको कथा पेस गर्छ।
आशिरमान आफ्नो सिनेमा दर्शकको मनमा बस्नेमा आशावादी छन्। उनलाई लाग्छ युवाले मन पराउने कथा सिनेमाले भन्छ। सिनेमाको कथामा 'देउ र लेउ' को पदावलीको 'क्याजुअल सम्बन्धन' भएकाले आशिरमानसँग सिनेमाका कुरा थोरै र उनको यस किसिमका सम्बन्ध तथा उनका व्यक्तिगत अनुभवका बारेमा धेरै हामी गफियौं।
उनले आफू त्यस्तै सम्बन्धमा रहेको खुलाए। सम्बन्ध उनको डेब्यू सिनेमा 'ग्याङ्स्टर ब्लुज'कै आशपास सुरू भएको थियो।
उनी त्यतिबेला आफूलाई 'कुल' र 'मोर्डन' ठान्थे। त्यही सोचका साथ उनी एउटा क्याजुअल सम्बन्धमा बसें। केही समयपछि नै उनको 'कुल' र 'मोर्डन' सोच भत्कियो।
'यो किसिमको सम्बन्ध हामी नेपालीहरूका लागि होइन रहेछ। यसको कुनै भविष्य छैन्। यसको अन्तिम नियती भनेको कुनै दिन सकिने नै हो', उनले भने 'मेरो जीवनमा पनि यस्तै एउटा सम्बन्ध भयो। सबको जीवनमा एकपटक हुन्छ नै होला तर बिना मायाको सम्बन्ध काम छैन्। माया छ भनेमात्र सम्बन्धमा बस्नु राम्रो हो।'
उनलाई यस्तो लाग्नुको पछाडि पनि कारण छ। सुरूमा उनीहरू दुबैले ख्यालठट्टा ठाने तर भएन त्यस्तो।
'कोइ पनि मान्छे एउटा स्तरमा नजिक भएपछि यो सम्बन्धको परिभाषाले नमाग्ने संवेगहरू आउन थाल्दा रहेछन्। त्यो कतिखेर आफ्नो नियन्त्रण बाहिर पुग्छ पनि थाहा नहुने। कहि न कहि चिप्लिने। यो अस्थायी हो सुरूमा यस्तो सम्बन्धले काम गर्छ भन्ने लाग्छ। तर, पछि हुँदै गएपछि पछि बाटो मोडिन थाल्छ। किनकी जसले जे भने पनि हामी मान्छे हो हाम्रा भावनाहरू कहिकतै सल्बलाउन सुरू भइहाल्छन्। '
एउटा भनेर सुरू गरेको सम्बन्धमा उनले त्यो सम्बन्धका हरियो झण्डा भन्दा पनि राता झण्डाहरू देखिन थालेपछि आशिरमान र उनकी 'ऊनी'ले यस सम्बन्धलाई थप अगाडी नबढाउनु नै ठीक ठानें।
'सुरू त आपसी समझदारीमै भयो। यसबाट धेरै नै एकअर्कालाई चिन्न थाल्यौं। त्यसपछि सुरू भयो सम्बन्ध। हुँदै जाँदा दुबैको इमोसन बिचमा आउन थाल्यो। थियौं क्याजुअल रिलेसनसिपमा तर हाम्रा एकअर्काप्रतिका बानी प्रेमीप्रेमिकाको जस्तो। हामीले जे किसिमको हुनेछैन भनेर सुरू गरेका थियौं, त्यतातीर जान लाग्यो। अनि रोक्नुको विकल्प थिएन।'
आशिरलाई लाग्छ उनी स्वयं पनि त्यसका लागि तयार थिएनन।
'म जहाँ जुन अवस्थामा थिएँ त्यसले ल त क्याजुअल भनेर सुरू गरे पनि अर्को बाटोमा जाउँ भनेर भन्ने अवस्थामा म थिइन्। एकअर्कामा फिलिङ्स थियो तर मेरो अवस्थाले उनले चाहेजस्तो बाटो हिँड्न सक्दैनथ्यो। म मेरो काममा ज्यादा फोकस हुन चाहन्थे, रिलेसनसिपमा म फोकस हुन सक्ने अवस्था थिएन', आशिरले भने।
आशिरले उनी आफू काममा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सोचें उसले पनि उनको कुरा बुझिन्। सम्बन्ध सकियो।
चलिरहेको सम्बन्ध झ्वाटै बिर्सन कहाँ सकिन्छ र ? आशिरले पनि सकेनन्।
'एक अर्कालाई केयर गर्न थालेकाले सजिलो त भएन, अलिअलि गार्हो भयो नै। सँगसँगै हामी त्यति लामो समयसँगै नभएकाले अगाडी बढ्नलाई मलाई लामो समय लागेन।'
योजना नगरेको कुरा भइरहेकाले सम्बन्ध सकेकोमा दुबैलाई पछुतो भएन किनकी त्यो सम्बन्ध त्यसका लागि थिएन। उनीहरू त्यसलाई 'रियलाइज' गरे।
यस्तो सम्बन्धमा आफू भएकाले, भोगेकोले होला अभिनय गर्ने पात्रको चरित्र पनि त्यस्तै भएको अवश्थामा पात्र बुझ्न सजिलो भयो।
उनले त्यसको इमोसन समात्न सकेको बताउँछन्। 'अनुभव नभएको कुरा गर्न त सिनेमामा सहज हुन्न। किनकी जुन संवेगको बारेमा थाहा छैन त्यसलाई समात्न र बुझ्न कठिन नै हुन्छ।'
डेब्यू सिनेमामा भाइ गुमाएर ग्याङ्स्टर बनेको पीडा थियो त्यो इमोसन फिल गर्न उनलाई सजिलो नभएको अझैं सम्झना छ।
'कहिले अनुभव नगरेको कुरा थियो। यसमा चाँहि अनुभव गरेको कुरा भएकाले त्यसलाई च्यानल गर्न सकें। '
उनलाई आफ्नो यस सिनेमामा शिल्पा मास्केसँग उनको केमेस्ट्री मनपरेको छ। ट्रेलर- गीत हेर्नेले पनि राम्रो केमिस्ट्री देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब दर्शकले कसरी लिने हुन्, त्यसैको प्रतिक्षा उनलाई छ।
आशिरले सिनेमाकी सारा पात्र जस्ती गर्लफ्रेण्ड आफूलाई नचाहिँने बताउँछन्।
'किनकी सिनेमाको त्यो सारा एकदमै छुच्ची छ, घमण्डी छ, अरूले भनेको नसुन्ने। इन्डिपेन्टेन्ट बोल्ड छ। उसमा यी दुई बाहेक नराम्रा कुरा धेरै छन्।'
त्यसैले उनी स्पष्ट भन्छन् , 'अँह त्यस्तो केटी चाहिँदैन्।'
आशिरलाई देख्ने बित्तिकै 'क्लिक' हुने केटी मनपर्छ। उनी आफू जस्तो छन् त्यस्तै केटी मनपर्छ। उनी आफू सेन्सेटिभ, इमोशनल र अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको बताउँछन्। त्यसैले उनलाई आफू जस्तै करियर फोकस्ड र इन्डिपेन्डेन स्विट एण्ड व्याबहारिक केटी मनपर्छ।
यो सबै गुण भएकी केटी भेटिन्छ त?
तर मिडियामाचाँहि उनी सदैव सिङ्गल हुन् रे।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २०, २०७५, १२:२१:००